Somaliland: Shacabka Caasimadda Oo Dareen Isku Mid Ah Kaga Jawaabay Muranka Tirinta Codadka Iyo Rabshadihii Ka Dhashay - Wargane News
Home Somali News Somaliland: Shacabka Caasimadda Oo Dareen Isku Mid Ah Kaga Jawaabay Muranka Tirinta...
Shacabka ku dhaqan Caasimadda Somaliland ee Hargeysa, ayaa ka hadlay Muranka ka taagan tirinta Codadka Doorashadii Madaxtooyada ee Dalka ka dhacday 13-kii bisha November, 2017-ka.
Dadweynaha Hargeysa oo Telefiishanka Eryal uu Makarafoonka la dhex maray isla-markaana waydiiyey siday u arkaan Muranka ka taagan Codadkii laga dhiibtay Doorashada iyo Rabshadihii dhawaan ka dhacay Magaalooyinka Dalka qaarkood, ayaa Komiishanka kula taliyey inay Xisbiyada u Caddaalad-falaan, iyagoo Xisbiyadana ugu baaqay in aanay Shacabka kicin.
Muwaadiniinta arrintan aragtidooda ka dhiibtay ayaa sheegay in Doorashada Madaxtooyadu si wanaagsan u qabsoontay, sidaa darteed loo baahan in sidii Daaha furnayd ee ay u dhacday, si la mid ah Natiijadeeda loogu dhawaaqo.
“Saddex Musharrax ayaynu kala dooranaynay, kii soo baxaana waa keennii, waxaan Shacabka Somaliland leeyahay Doorashadan waxa looga codeeyay meel aan doorashooyinkii hore laga codaynin, waxaanu doonaynaa inay Somaliland gaadho meel aanay hore u gaadhin ee Nabaddiina ilaashada.”ayuu yidhi, mid ka mid ah Dadweynaha Caasimadda Hargeysa.
Muwaadin kale oo isaguna Arrintan ka hadlay ayaa Dhallinyarada Dalka u soo jeediyey in aanay Rabshado aan cidna u diran samaynin “Shacabka Somaliland waxay u codeeyeen si Nadiif ah oo aan is-riix-riix lahayn. Musharraxiinta midkoodna kuma ololayn haddii la iga cod bato dhallinyaradu ha ii dagaalanto oo Guryahooda haka soo baxaan.”ayuu yidhi, waxaanu intaa sii raaciyey “Komiishanka waxaanu ka doonaynaa inay Dadka hor-keenaan wax hufan.”
Dadweynaha Aragtidooda la waydiiyey ayaa isku aragti ka bixiyey in Doorashadu si wanaagsan u dhacday, Xilligana Adduunku indhaha ku hayo Somaliland, loona baahan yahay in dedaalkii la sameeyay la sii wanaajiyo, laakiin aan loo baahnayn in Asxaabtu Shacabka kiciyaan “Komiishanka Qaranku way dedaaleen oo Hawl wanaagsan ayay qabteen. Asxaabta Qaranka waxaan leeyahay Shacabku way idiin codeeyeen, waxaad nagu lahaydeena Codkaasi ayuu ahaa, markaa haddaanu nahay Shacabka dagaal naguma lihidin. Shacabkana waxaan leeyahay Adduunku wuu inna eegayaa ee isku Tanaasul muujiya.”ayuu yidhi, Muwaadin kale oo wax laga waydiiyey muranka ka dhashay Tirinta Codadkii laga dhiibtay Doorashada.